Sheeko Xikmad Leh Oo Gaaban - Cishqi.com
Muqdisho ( Cishqi ) – Akhristow aan kula wadaagno mid kamid ah sheeko xikmad leh oo gaaban gaar ahaan sheeko yaab leh, waxa ayna xambaarsan tahay murti.
Mararka naftu waxa ay u baahan tahay sheeko gaar ahaaan sheeko xikmad leh oo gaaban. Sheekadani ayaa ah sheeko dhab ah oo weliba yaab leh.
Waxa ayna dhex martay hooyo leh labo wiil iyo nin ay xiligaas is baranayeen ama is shukaansanayeen. Hadaba sheekadu waxa ay ku bilaabaneysaa sidatan:
Inta aanan uguda galin qormadeena ku saabsan sheeko xikmad leh oo gaaban, waxaan jeclaan lahayn in aynu kula wdaagno sheekooyin xikmad leh oo gaaban, kuwaasoo akhristeyaasheenu la dhaceen. Haddii aadan horay u akhrisan sheekooyinkaasi cajibka ah halkaan ka akhriso: Sheekooyin xikmad leh oo gaaban
Sheeko xikmad leh oo gaaban: Hooyo la soo furay
Maalin maalmaha kamid ah ayaa hooyo iyo labo wiil oo ay dhashay dukaan wax ka soo iibsanayay. Waxa ayna hooyadu la kulantay nin ay horey isu garanayeen oo isna dukaanka wax ka soo iibsanayay. Lakin ninka waxa uu ogaa oo kaliya in hooyada la guursaday mana ogeyn in ay caruur dhashay.
Waa ay isa salaameen, waxa ayna u sheegtay in ay madax banaan tahay. Markaasuu ku yiri oo miyaa lagu furay? Marakaasay tiri haa, balse kuma aanan khasaarin guurkaygii oo laba nin baan leeyahay.
Haddii uu i furayna calafkaa na kala geeyay. Labada nin ayaa i anfacaya, kuwaas ayaa wax i taraya. Ninkii waa uu yaabay, maxaad sheegaysaa ayuu dhahay. war miyaad waalatay maxaad ku hadleysaa?
Hooyada labada nin dhashay ayaa mar labaad soo boodday waa run ma qasaarin oo laba nin oo labaatan jir ah ayaan leeyahay ayey ku dhahday. Ninkii waa uu yaabay iska aamus ayuu ku dhahay wax fiican kuma hadlayside. Wallaahi hadal fiican ayaan ku hadlay ayay dhahday, ee ku farax hadalka aan kuu sheegay.
Maxaan ku farxaa ayuu dhahay waaba yaabbanahay, war farxad leh miyaadba ii sheegtay ayuu dhahay, hadal aan ka naxay oo aan ka yaabo oo kaliya ayaadba ii sheegtee.
Ninkii oo yaabban oo ayaa waxaa soo kala dhex galay ninkii dukaanka, oo yiri maxaad isku haysatiin? Ninkii yaabbanaa ee naxsanaa ayaa soo booday, gabadhaan hore ayaan isku garanaynay, haddana waan isa salaanay, maalin dhexdaas ah ayaan maqlay in ay guursatay, waxa ayna ii sheegtay in la soo furay balse ay leedahay laba nin oo labaatan jirro ah.
Ninkii dukaanka lahaa ayaa soo booday oo yiri; waxa ay ka waddaa laba wiil ayaan dhalay, oo guurkii kuma qasaarin. Ninkii oo yaabban baa yiri, haa, may sidaa far waaweyn wax noogu dhigto.